युरो २०२० सकिएसँगै युरोपका क्लबहरूको ‘प्रि-सिजन’ सुरु - bampijhyala.com
Home > खेलकुद > युरो २०२० सकिएसँगै युरोपका क्लबहरूको ‘प्रि-सिजन’ सुरु
४ श्रावण २०७८, सोमबार १२:०४ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । युरो २०२० सकिएसँगै युरोपका क्लबहरूको ‘प्रि-सिजन’ सुरु भएको छ । अनि यससँगै खेलाडी स्थान्तरणका खबरहरू पनि आउन थालेका छन् । यस्तोमा युभेन्ट्सका फेडेरिको किएसा बार्यन म्युनिखसँग जोडिएका छन् । युरोमा इटालीका लागि सशक्त खेल देखाएका किएसाको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ । प्रशंसा गर्ने सूचीमा बार्यनका नयाँ प्रशिक्षक युलियान नागल्सम्यान पनि छन् । ‘मैले लामो समयदेखि उनको खेल हेर्दै आएको छु । उनी प्रतिभाशाली खेलाडी भएकोमा शंका छैन । विशेषगरी वान-भर्सेस-वानमा उनी खतरनाक देखिन्छन् । अनि विपक्षीको पोष्टमा बल प्रहार गर्न धेरै समय लगाउँदैनन्,’ नागल्सम्यानले जर्मन अखबार बिल्डसँग भनेका छन् ।
बार्यन प्रशिक्षक युभेन्टसका खेलाडीलाई आफ्नो टिममा लिन लालयित पनि हुनसक्छन् । तर यसो भन्दैमा किएसालाई बायर्नले अनुबन्ध गर्न सक्छ भन्‍ने होइन । हुन त उनीसँग जोडिएका अन्य क्लबका लागि पनि यथार्थ यही हो ।
पछिल्लो समय चेल्सीले पनि किएसालाई अनुबन्ध गर्न चाहेको खबर आइरहेको छ । जर्मन अखबार बिल्डले चेल्सीले किएसाको विषयमा युभेन्टससँग सम्पर्क गरेको लेखेको छ । तर गोल डटकमका अनुसार बिल्डको रिपोर्टमा कुनै सत्यता छैन । अनि युभेन्टस कुनै पनि हालतमा किएसालाई क्लबमा राख्न चाहन्छ । १० करोड युरोको प्रस्ताव नै आए पनि युभेन्टसले किएसालाई नबेच्‍न प्रतिबद्धता गरेको छ ।
हो, यसपटकको सरुवा बजारमा किएसाको माग ह्वात्तै बढेको छ । यसको एउटा कारण, उनले युरोमा देखाएको प्रदर्शन हो । हुन पनि किएसाले युरोमा गज्जब कै खेल देखाए । नकआउटमा अस्ट्रिया र स्पेनविरुद्ध गोल गरे । इंग्ल्यान्डविरुद्धको फाइनल दौरान भने उनी घाइते बने । र, ८६ औँ मिनेटमा मैदान छाडे । तर त्यसअघि भने उनी इटालियन अग्रपंक्तिको केन्द्रविन्दु रहेका थिए ।
उपाधि भिडन्तमा पूरा समय मैदानमा नरहे पनि इटालियन सञ्चार माध्यममा किएसाको प्रशंसा गरियो । ‘किएसालाई सधैँभरी वेम्बलीका नायकका रुपमा सम्झिइनेछ,’ गाज्जेटा डेलो स्पोर्टले लेखेको छ । किएसा युरोका कारण मात्रै चर्चामा आएका भने होइनन् । उनलाई केही वर्षअघि नै, इटालियन फुटबलको भविष्य मानिएको थियो । इटालीले सन् २०१९ मा अन्डर-२१ युरोपियन च्याम्पियनसिप जित्दा किएसा टिमका मुख्य खेलाडी थिए । त्यसपछि उनको यात्रा मोडियो युभेन्टसतर्फ । फियोरेन्टिनाबाट किएसा टुरिन त जाने भए तर ‘लोन’मा । दुई वर्षका लागि ‘लोन’ र त्यसपछि स्थायी स्थान्तरण, युभेन्टसले किएसाका लागि बनाएको योजना यही हो ।
किएसालाई ऋणमा अनुबन्ध गर्दा युभेन्टसले सिरी ‘ए’ कै फियोरेन्टिनालाई एक करोड युरो तिरेको छ । अब सन् २०२३ मा थप चार करोड युरो तिर्दै उसले २३ वर्षीय फरवार्डलाई स्थायी रुपमा आफ्नो खेलाडी बनाउनेछ । आफूलाई आर्थिक भार नपरोस भनेर युभेन्टसले यस्तो जुक्ति निकालेको हो ।
युभेन्टसले किएसाका लागि पाँच करोड खर्च गरेको धेरैलाई चित्त बुझेको छैन । युभेन्टसकै पूर्व खेलाडी क्लाउडियो मारचिसोले पनि किएसा खरिद गर्ने निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका थिए । मुख्यतः उनको प्रश्न युवा किएसाका लागि तिरिएको स्थान्तरण रकममाथि थियो । अनि ठूलो रकम तिरेर अनुबन्ध गरेका खेलाडीले पर्याप्त खेल्ने मौका पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्‍ने पनि उनको चिन्ता थियो ।
हुन पनि युभेन्टसमा पहिलेबाटै पर्याप्त खेलाडी थिए । त्यो पनि नाम चलेको । यस्तोमा ‘किएसाले खेल्न पाउँछन् त ?’ भन्‍ने प्रश्न जायज थियो । किएसाले कुन पोजिसनबाट खेल्न पाउँलान् भन्‍ने जिज्ञासा पनि थियो । त्यस्तो जिज्ञासाको जवाफ उनले लेफ्ट विङगर, राइट विङगर, विङब्याक जुनसुकै पोजिनबाट खेलेर दिए । युभेन्टसको अग्रपंक्तिलाई बलियो बनाउन उनको भूमिका उल्लेख्य रह्यो । हो, युभेन्टसमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने । तर महत्वपूर्ण खेलहरूमा किएसाले युभेन्टसलाई डोर्‍याएकै हुन् ।
युभेन्टसले रोनाल्डोमाथि ठूलो खर्च गरेको छ । च्याम्पियन्स लिग जित्ने महत्वकांक्षाले । तर लक्ष्य प्राप्त भएको छैन । यस्तोमा युभेन्टसले रोनाल्डोलाई बेच्‍नसक्ने हल्ला पनि चलेको थियो । ३६ वर्षिय रोनाल्डोलाई अनुबन्ध गर्ने इच्छा कुनै क्लबले देखाइहालेको भने छैन । कमसेकम औपचारिक रुपमा । हुन त रोनाल्डो जस्ता स्टारमाथि अन्य ठूला क्लबको चासो रहन्छ नै । तर कोभिड-१९ का कारण कुनै पनि धनी क्लब अत्याधिक खर्चिलो हुने धेयमा छैनन् । यद्यपि कुनै क्लब रोनाल्डो खरिद गर्ने प्रस्ताव बोकेर आए, युभेन्टसले स्वागत गर्नेछ ।
जस्तै, च्याम्पियन्स लिगमा एफसी पोर्टोविरुद्ध । पहिलो लेगमा उनले एक गोल गरे । अनि दोस्रो लेगमा दुई गोल थपे । युभेन्टसलाई क्वार्टरफाइनल पुर्‍याउन किएसाले भरमग्दुर प्रयास गरे । सिरी ‘ए’ मा पनि उनले गरेको प्रदर्शन सम्झनलायकको छ । गत सिजन सबैखाले प्र्रतियोगितामा गरी उनले कुल १५ गोल गरे । अनि ११ अस्सिट पनि उनको नाममा छ । त्यसकारण, युरोमा आएर मात्रै उनी सबैको नजरमा परेका होइनन् ।
किएसाले क्लब फुटबल र अन्तराष्ट्रिय फुटबल, दुवैमा आफ्नो प्रतिभा देखाइसके । उनको प्रतिभामाथि शंका गर्ने सायदै कोही बाँकी होलान् । यस अर्थमा उनी युभेन्टसका लागि अर्को सिजन मुख्य अस्त्र बन्‍ने पक्का छ । हुन त रोनाल्डो पनि युभेन्टसमै रहनेछन् । तर युभेन्टसको अग्रपंक्ति किएसा वरिपरी निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्, मासिमिलियानो एलेग्री । किनभने युभेन्टसका लागि रोनाल्डो दिर्घकालिन योजना होइनन् ।
सन् २०१८ मा रियल म्याड्रिडबाट इटाली पुगेका रोनाल्डो युभेन्टस समर्थकमाझ लोकप्रिय छन् । उनले आफ्नो गोल गर्ने क्षमतालाई गुमाएका छैनन् । तर युभेन्टसलाई च्याम्पियन्स लिग जिताउन भने असमर्थ हँुदै आएका छन् । गत सिजन त सिरी ‘ए’ मै पनि युभेन्टसको प्रदर्शन सोचे अनुरुपको भएन । झन्डैले चौँथो स्थान गुमायो ।
युभेन्टसले रोनाल्डोमाथि ठूलो खर्च गरेको छ । च्याम्पियन्स लिग जित्ने महत्वकांक्षाले । तर लक्ष्य सफल भएको छैन । यस्तोमा युभेन्टसले रोनाल्डोलाई बेच्‍नसक्ने हल्ला पनि चलेको थियो । ३६ वर्षिय रोनाल्डोलाई अनुबन्ध गर्ने इच्छा कुनै क्लबले देखाइहालेको भने छैन । कमसेकम औपचारिक रुपमा । हुन त रोनाल्डो जस्ता स्टारमाथि अन्य ठूला क्लबको चासो रहन्छ नै । तर कोभिड-१९ का कारण कुनै पनि धनी क्लब अत्याधिक खर्चिलो हुने धेयमा छैनन् । यद्यपि कुनै क्लब रोनाल्डो खरिद गर्ने प्रस्ताव बोकेर आए, युभेन्टसले स्वागत गर्नेछ ।
युभेन्टसमा सर्वाधिक कमाउने खेलाडी रोनाल्डो नै हुन् । उनको वार्षिक तलब तीन करोड युरो भन्दा बढी छ । अनि उनलाई अनुबन्ध गर्न चाहने क्लबले युभेन्टसलाई दुई करोड ९० लाख युरो स्थान्तरण रकम पनि तिर्नुपर्नेछ । यस्तोमा रानाल्डो बेचिने भन्दा एक वर्षपछि ‘फ्रि-एजेन्ट’का रुपमा नयाँ क्लबतर्फ लाग्ने सम्भावना बढी छ ।
कोभिड-१९ महामारीका कारण आर्थिक नोक्सान व्यहोरिरहेको युभेन्टस आफ्ना केही खेलाडीलाई बेच्‍न चाहन्छ । ती खेलाडी मेरिह डेमिराल, आरोन राम्से लगायत हुन् । हालसम्म यी खेलाडीमाथि कुनै क्लबले चासो देखाएको छैन । यसकारण, युभेन्टसले नयाँ खेलाडी खरिद गर्ने आँट गर्न सकेको छैन । किनभने उसको नीति, खेलाडी बेच्‍ने अनि किन्‍ने हो ।
यसो भन्दैमा युभेन्टस कुनै नयाँ खेलाडी पहिचान नगरी बसेको चाँहि छैन । हाल उसको नजर इटालीकै मिडफिल्डर म्यानुएल लोकाटेलीमाथि । सासुआलो, लोकाटेलीलाई क्लब छाड्न दिन तयार छ । तर उसको शर्त छ, उचित मूल्य । युभेन्टसप्रति लोकाटेली आकर्षित छन् । नहुन पनि किन, युभेन्टस समर्थक नै भएपछि । तर उनीमाथि नजर आर्सनलको पनि छ । यहाँ फुटबल बजारको नियम हाबी हुनसक्छ । त्यो भनेको, जो तोकिएको रकम तिर्न राजी हुन्छ, खेलाडी उसकै । तर यसो भनिरहँदा आर्सनलको ‘मेन्यू’मा च्याम्पियन्स लिग छैन, लोकाटेलीलाई फकाउन । युभेन्टस भने च्याम्पियन्स लिगमा छ ।
अब के त ? किएसका कै उमेर भएका र युरोमा समान दुई गोल गरेका मिडफिल्डरको नयाँ गन्तब्य कसरी निक्र्योल हुन्छ ? यहाँ एउटा उपायको प्रयोग हुनसक्छ । युभेन्टसले आफ्ना कुनै खेलाडी र तोकिएको भन्दा केही कम रकम तिरेर लोकाटेलीलाई आफ्नो बनाउन सक्छ । युभेन्टस सफल भएमा इटालीको सर्वाधिक सफल क्लबमा प्रतिभाशाली युवा खेलाडीको संख्या बढ्नेछ ।
युभेन्टसमा पहिलाबाटै डेयान कुलुसेभेस्की छन् । २१ वर्षिय स्विडिस विङगरको खेल शैली किएसाको जस्तै छ । अनि यही टिममा डच रक्षक माथ्थिस डे लिट पनि छन् । जो २१ वर्ष कटेका छैनन् । अब प्रश्न उठ्छ, युवा खेलाडीहरूले भरिएको युभेन्टस च्याम्पियन्स लिग जित्ने लक्ष्यमा सफल होला ? जवाफ सायदै कोहीसँग होला । तर लक्ष्य च्याम्पियन्स लिग नै हो । अनि सिरी ‘ए’ पनि । त्यसैले त युभेन्टसले प्रशिक्षक परिवर्तन गरेको हो । च्याम्पियन्स लिगको फाइनलसम्म पुर्‍याएका र कयौँ पटक लिग जिताएका एलेग्रीलाई क्लबमा फर्काइएको हो ।
तर आगामी बाटो एलेग्रीका लागि सजिलो छैन । कारण उनको क्षमता होइन । बरु युभेन्टसको असन्तुलित टिम हो । उनी उपलब्ध खेलाडी अनुसारको खेल शैली, संरचना र रणनीति छान्‍न माहिर छन् । युभेन्टसमा भएका फरवार्डहरूका कारण, एलेग्रीका लागि ४-२-३-१ संरचना उपयुक्त हुनसक्छ । तर टिममा भएका मिडफिल्डरहरू ४-३-३ मा फिट हुन्छन् । उसो त युभन्टेस रक्षापंक्तिमा तीन सेन्ट्रल डिफेन्डर खेलाउने टिम पनि हो । यस्तोमा एलेग्रीको योजना कस्तो हुन्छ, प्रि-सिजनले प्रष्ट पार्ला ।
अब कुरा फेरि किएसाकै । एलेग्रीले युभेन्टसलाई सफल बनाउने हो भने, मुख्य भूमिका किएसाकै हुनसक्छ । रोनाल्डोले इटाली नछाड्ने निणय गरे पनि । यति अनुमान गर्न गाह्रो छैन । किनभने वेम्बलीका नायक फेरिएको युभेन्टसमा पनि नायक हुन तयार छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा
थनु लुँय भाउ थात वन
१६ श्रावण २०७८, शनिबार १२:२० bampijhyala 0
टोकियोमा जारी ३२औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा ४० पदकसहित चीन शीर्ष स्थानमा
१५ श्रावण २०७८, शुक्रबार १४:५३ bampijhyala 0
एथ्लेटिक्स खेलाडी सरस्वती चौधरी टोकियो ओलम्पिकको पहिलो चरणबाटै बाहिरिए
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । एथ्लेटिक्स खेलाडी सरस्वती चौधरी टोकियो ओलम्पिकको...
आज दोलखामा थप ३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि ४ श्रावण २०७८, सोमबार १२:०४
‘सम्झिनी पानी छम्किनी’ भिडियोमा दीपा र भुवनको रोमान्स ४ श्रावण २०७८, सोमबार १२:०४
लघुकथा–पढ्ने रहर ४ श्रावण २०७८, सोमबार १२:०४
पछिल्लो चरणमा कोभिड १९ को संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले सचेत रहन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाको अपिल ४ श्रावण २०७८, सोमबार १२:०४
सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला ४ श्रावण २०७८, सोमबार १२:०४